Shina boaty fisakafoanana plastika plastika avo lenta ao Shina Miaraka amin'ny sarony. mpanamboatra sy mpamatsy | XINLONG
Kitapo fisakafoanana plastika plastika avo lenta Microwavable PP miaraka amin'ny sarony.
Sakafo PP kilasy sakafo: vita amin'ny akora PP kilasy sakafo, afaka mifandray mivantana amin'ny sakafo.
Boaty saosy plastika mangarahara
Sariaka amin'ny tontolo iainana, mitahiry, azo ariana miaraka amin'ny sarony
Mangarahara na namboarina
Fiarovana amin'ny laoniny sy mangatsiaka ary fitehirizana
Sotro, spork, antsy, lasopy, fork, kit napkint dia azo zahana avokoa
Fonosana sakafo, fitehirizana, Picnic an-dakozia, trano fisakafoanana
1. Fitaovana PP kilasy sakafo
Namboarina tamin'ny fitaovana PP kilasy sakafo, afaka mifandray mivantana amin'ny sakafo.
2. Porofo mivaingana
Famolavolana UConcave groove, fampisehoana famehezana tsara, tsy misy famoahana.
3. Fitaovana matevina
Mora miovaova, tsy mora simba.
Kaopy saosy boribory azo alefa no ampiasaina indrindra amin'ny fonosana sakafo alain-doha sy fitehirizana sakafo, toy ny vary, legioma, lasopy, voankazo, saosy, voanjo, tsakitsaky, sns. bara, fivarotana lehibe sns.
* Fitaovana PP kilasy ambony sakafo ambony
* Volavola matevina, fanoherana tsindry tsara ary malefaka
* Azo namboarina mifanaraka amin'ny zavatra ilainao
* Misy santionany maimaimpoana
Manana mihoatra ny 300 karazana fitoeran-kitapo sakafo tsy azo ampiasaina amin'ny habe sy loko samihafa izahay mba hihaona amin'ny fangatahanao.
Alefaso ny fangatahana hifandraisanay aminay, hahazoana ny vidiny tsara kokoa!
Amin'izao fotoana izao, ny latabatra plastika azo esorina amin'ny tsena dia vita amin'ny PP (polypropylene). Ity karazana fitaovana ity dia manana fiarovana avo lenta sy filaminana milamina tsara. Ny haavon'ny lelany dia mahatratra 200 ℃, izay tsy hiova amin'ny hafanan'ny hafanana ambony an'ny microwave. Ny plastika hafa dia mety ho levona sy ho lo amin'ny hafanana avo, ary mety hamoaka zavatra misy poizina koa, manimba ny fahasalaman'ny olombelona. Noho izany, ny plastika No.5 PP ihany no azo atsofoka ao anaty lafaoro misy microwave mba hampafana.
Mba hialana amin'ny tsy fampiasana vokatra plastika "ID", indrindra boaty fisakafoanana toy izany, fa koa handavana.
Tsy misy ny famantarana QS sy ny isa, ny tampon'ny boaty fisakafoanana dia tsy milamina, miaraka amin'ny loto na tasy.
Amin'ny ankapobeny, boaty fisakafoanana plastika mangarahara dia vita amin'ny polypropylene madio (PP), miaraka amin'ny anton'antoka fiarovana avo lenta; Ny boaty fisakafoanana miloko marevaka dia mety mampiasa plastika fako, ka arakaraky ny maizina ny lokony, tsy dia atokisana izy.
Teo aloha: Sambo miendrika boaty misy voankazo miloko
Manaraka: Ny boatin-tsakafo plastika fanao japoney dia maka vata-pisakafoanana
Takelaka boribory vita amin'ny varimbazaha vita tamin'ny takelaka ...
Sambo miendrika boaty misy voankazo miloko